CONVISTA သည် ၆၀၀ မှ ၁၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသော supercritical (ultra-supercritical) ယူနစ်ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်ရှိမြင့်မားသောနှင့်အလတ်စားဖိအားပိုက်စနစ်များအတွက်အပြိုင်လျှောတံခါးပေါက်အဆို့ရှင်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင် CONVISTA သည် ၆၀၀ မှ ၁၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသော supercritical (ultra-supercritical) ယူနစ်ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်အမြင့်နှင့်အလတ်စားဖိအားပိုက်စနစ်များအတွက် Parallel Slide Gate Valve များကိုအောင်မြင်စွာတီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဂဟေဆက်နှင့်အတူတံဆိပ်ခတ်ဖွဲ့စည်းပုံ ...
CONVISTA သည် OHL မှတဆင့်ကိုလံဘီယာရှိ ECOPETROL မှကြီးမားသောစီမံကိန်းတွင်ရေစနစ်အဆို့ရှင်များအတွက်ပေါင်းစည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်
CONVID-19 ကြောင့်နှစ်ဝက်နှောင့်နှေးပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်ဇွန်လ ၂ ရက် ၂၁ တွင် CONVISTA သည်ကိုလံဘီယာရှိအကြီးစားရေစီမံကိန်း၏ DN1200 CL300၊ Double Eccentric Butterfly Valves နှင့် Resilient Gate Valve & Air Release Valves များထောက်ပံ့ရန်ကန်ထရိုက်ပေးခဲ့သည်။ အဘို့ ...
CONVISTA သည်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ဒုတိယအမျိုးအစားဆေးပစ္စည်းကိရိယာထောက်ပံ့မှုအတွက်အတည်ပြုပြီးသန်းနှင့်ချီသော Goggles ကို HLL Lifecare Limited သို့ပေးအပ်ခဲ့သည်။
CONVISTA သည်အီတလီရှိ ANSALDO ENERGIA သို့ပေါင်းစပ်စက်ဝန်းအတွက် Valves များထောက်ပံ့ရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်
ယခုနှစ်အစတွင်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅,၂၀၂၀ တွင်၊ CONVISTA ကို ANSALDO ENERGIA သို့ပေါင်းစပ်စက်ဝန်းစွမ်းအင်စက်အတွက်လက်ဖြင့်ဘောလုံးအဆို့ရှင်နှင့်စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်များကိုတရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ အားလုံးအဆို့ရှင်ဒီဇိုင်းနှင့် wi နှင့်အညီထုတ်လုပ်လိမ့်မည် ...
ရေနံအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသည်ရေနံထုတ်ကုန်များ၊ ပြုပြင်ထားသောနှင့်လေးလံသောရေနံထုတ်လုပ်မှုများတွင်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရေနံစိမ်းဒုတိယအဆင့်ဖြစ်စဉ်၏နက်ရှိုင်းမှုနှင့်အလင်းဟိုက်ဒရိုကာဘွန်တို့၏ပြန်လည်ထူထောင်မှုနှုန်းကိုတိုးတက်စေရုံသာမကလောင်စာဆီအရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်စေပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါလျော့ကျစေသည်။
၁။ အထွေထွေဤအဆို့ရှင်အမျိုးအစားသည်စက်မှုပိုက်လိုင်းစနစ်တွင်အသုံးပြုသောသင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းတပ်ဆင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ 2. ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 2.1 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် 2.1.1 ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစံ： API 600、 API 602 2.1.2 Connection Dime ...
Check Valves ၏လည်ပတ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းလက်စွဲ
1. နယ်ပယ် DN အကွာအဝေးတွင် DN15mm ~ 600mm (1/2 "~ 24") နှင့် PN အကွာအဝေး PN1.6MPa ~ 20MPa (ANSI CLASS150 ~ 1500) ချည်, အနားကွပ်, BW နှင့် SW လွှဲနှင့်စစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်ပါဝင်သည်။ 2.Uageage: 2.1 ဒီအဆို့ရှင်ပိုက်စနစ်အတွက်နောက်ပြန်အလယ်အလတ်စီးဆင်းမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၂.၂ Valve material sel ...
၁။ ဤစီးရီး၏အထွေထွေအဆို့ရှင်များသည်စနစ်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ပိုက်လိုင်းစနစ်တွင်ပိုက်လိုင်းများကိုပိတ်ရန်သို့မဟုတ်ဖွင့်ရန်အသုံးပြုသည်။ 2. ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 2.1 နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် 2.1.1 ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း: API600: API603、 ASME B16.34、 BS1414 2.1.2 ဆက်သွယ်မှုအဆုံးအတိုင်းအတာ： ASME B16.5、 တစ် ...
API 6D SLAB GATE VALVE ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုလက်စွဲ
1. ဂိတ်အဆို့ရှင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု 1.1 အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို: အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ၏ DN-NPS1 "~ NPS28" PN-CL150 ~ CL2500 ပစ္စည်း: ASTM A216 WCB ပင်မ - ASTM A276 410; ထိုင်ခုံ - ASTM A276 410; မျက်နှာပြင်ကိုပိတ်ခြင်း —VTION 1.2 သက်ဆိုင်သောကုဒ်များနှင့်စံသတ်မှတ်ချက်များ6API 6A6API 6D 1.3 အဆို့ရှင်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (ပုံ ၁ တွင်ကြည့်ပါ) ပုံ ၁ ...
အမျိုးအစားအမှတ်တရုတ်ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံအမရေိအင်္ဂလန်ဂျာမနီဂျာမနီ GB1220 GB1221 GB12228 GB12229 GB12230 JIS ISO683 / 13 ISO683 / 16 ANSI ASTM BS970 BS1449 DIN17440 DIN17224 သံမဏိသံမဏိ 1 WCA G5151 SCPH1 A216 WCA 161Cr-430F GS-C25 ...
တပ်ဆင်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းလက်စွဲစာအုပ် - Triple Electric Butterfly Valves
၁။ နယ်ပယ်သတ်မှတ်ချက်တွင်ပုံမှန်အချင်း NPS 10 ~ NPS48၊ ပုံမှန်ဖိအားအတန်း (150LB ～ 300LB) သုံးပွင့်ဆိုင်သောသတ္တုတံဆိပ်ခတ်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်များပါ ၀ င်သည်။ 2. ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 2.1 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ 2.1.1 ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစံ： API 609 2.1.2 အဆုံးမှအဆုံးချိတ်ဆက်မှုစံ： ASME ...
ASME Ball Valve ၏တပ်ဆင်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းလက်စွဲ
၁။ ရည်မှန်းချက်ဤလက်စွဲတွင်လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှု၊ အဆုတ်လည်ပတ်မှု၊ ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်ရေနံဓာတ်ငွေ့လည်ပတ်ထားသောအနားကွပ်ချိတ်ဆက်မှုသုံးခုပါ ၀ င်သောလည်ပတ်ဘောလုံးအဆို့ရှင်များနှင့် NPS 8 ~ 36 & Class 300 ~ 2500 တို့ဖြင့်အပြည့်အဝဂဟေဆက်ထားသောအဆို့ရှင်များပါ ၀ င်သည်။ 2. ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 2.1 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ2...